COVID-19 In kasta oo laga naxo, waqtiyada dhibaatooyinka sannadihii la soo dhaafay waxay sidoo kale keeneen qaar ka mid ah hal-abuurka ugu caansan taariikhda ilaa maanta la adeegsanayo. Laga soo bilaabo ambalaaska oo la abuuray intii lagu jiray qarniyadii dhexe si looga caawiyo dhakhaatiirta inay si dhakhso leh ugu tagaan oo u qaadaan bukaanka, si ay u duubto cajalad inta lagu jiro WWII oo ka caawineysa askarta inay dayactiraan qalabka ...
Sida ururo ganacsi oo kale oo badan, Ururka Wax Soosaarayaasha Moodada ee Shiinaha ayaa sidoo kale bilaabay mashaariic loogu talagalay soo jiita jiilka soo koraya. Maanta, qorista jiilka soo socda ee shaqaalaha waxay noqotay mudnaanta koowaad ee soosaarayaasha Shiinaha. Waan ogahay codadkan ...
Liquid silica gel waxaa loo soo gaabiyaa LSR, oo ah wax soo saar ay u roonaan karaan macaamiisha iyo soo saarayaasha. Jellada dareeraha ah ee dareeraha ahi waxay ka samaysan tahay alaabada silica silica. Waxay leedahay dabacsanaan wanaagsan, biyo celin la'aan iyo u adkaysiga qoyaanka, waxayna u adkeysataa aashitada, alkaliska iyo walxaha kale ee kiimikada ah. Guud ahaan ...
Barashada habka wax taaj oo kale ee duritaanka balaastigga ah waxay noqon kartaa wax yar marka hore. Shirkaddaadu waxay soo martay toddobaadyo, bilo ama xitaa sannado badan oo cilmi-baaris iyo horumarineed ah si ay u qaabeyso badeecada ugu cusub, uguna hal-abuurka badan uguna guusha badan. Waxaad bilaabeysaa inaad si qoto dheer u qodato oo aad qorsheyso sida sheygaaga ...
Ma waxaad u xulaneysaa qalabka ku habboon qaybahaaga caaga ah?
Doorashada qalabka saxda ah nooc kasta oo badeecad ah waa muhiim si loo kordhiyo shaqeynta iyo faa'iidada sheyga. Kaliya ha tixgelin waxa ay tahay shaqada dhamaadka aad sheygu yahay. Hubso inaad ogtahay waxa ka soo baxa iyo waxa ka baxa sida loo isticmaali doono iyo waxa ku soo kordha ...